Somaliland: Duufaanta Oo Sababtay Internet La’aan – Goobjoog News
Magaalooyinka Somaliland ayaa maanta la sheegayaa internet la’aan marka laga reebo Internet ka shirkada Telesom .
Waxaana Internetka go’ay uu saameeyey shaqada magaalooyinka, waxaa loo sababeeyay duufaanadii ku dhuftay xeebaha gobalka Salal taas oo sameeyey oo weliba jaray xadhkihii iyo Toweradi Internet- ka Jabuuti ka soo qaadi jiray . Badi shirkadaha Somaliland Internet kiu waxuu uga yimaada dalka Jabuuti
Dhinaca kale, Lix qof ayaa lagusoo waramayaa in ay ku dhinteen Roobab Duufaano wata Oo xalay ka da’ay Deegaanada iyo Xeebaha Gobalka Salal Sida uu Goobjoog News u xaqiijiyay wariye Maxamed Cawaale Daahir Oo ku Sugan Gobalkaasi.
Dhibaatadan la sheegayo Somaliland waa qeyb ka mid roobab iyo duufaanno ku dhuftay 48 saac la soo dhaafay xeebaha waqooyi ee dalka kuwaas oo sababay khasaare naf iyo maal leh.
Boqor Buurmadow Oo Lagu Xukumay Saddex Sano Oo Xabsi Ah